Green Friday: kedu ihe ọ bụ na olee mkpa ọ dị | Green Renewables
Portillo nke German | 24/11/2021 16:28 | Gburugburu
Black Friday bụ ihe a na-ekwughị banyere afọ ole na ole gara aga na Spen. Otú ọ dị, ugbu a, ọ na-esiri mmadụ ike ịghara ịma ya. Ọ bụ ọdịnala ndị ahịa nke amụrụ na United States ma na-anwa imepụta mbelata oke iwe na onyinye na-adọrọ adọrọ maka ndị na-azụ ahịa. Ebumnobi bụ isi bụ ire ere ọ bụla. A na-eme ya kwa ọnwa Nọvemba. Chee ihu a ije nke unbridled oriri tupu Christmas ememe ebe ọ bụkwa iwesa, na Friday green. Ọ bụ mmegharị nke na-akwado oriri dị iche iche, ọrụ na-adigide.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Green Friday na ihe njirimara ya na ebumnobi ya bụ.
1 Kedu ihe bụ Green Friday
2 Oriri ala
3 Ụlọ ọrụ mmetọ na Green Friday
4 Ndekọ Ahịa
Kedu ihe bụ Green Friday
Green Friday ma ọ bụ Green Friday ga-eme ememe dị ka onye na-emegide ya na Nọvemba 26 na ga-akwalite ndị otu “dị nwayọ” nke na-agba mbọ imegharị ihee, obere ụlọ ahịa, onyinye aka ma ọ bụ ire ahịa nke abụọ. Naanị ọ na-akwado ka a ghara iri ya ụbọchị ahụ, naanị n'ihi na ihe niile dị ọnụ ala. Ị na-azụkarị ọtụtụ ihe ndị na-adịghị gị mkpa, n'ikpeazụkwa, ọtụtụ n'ime ihe ndị ị na-azụta na-emesị bụrụ uzuzu n'ime ụlọ ịsa ahụ.
Anyị maara na n'ime obodo a, a na-achọsi ike maka ntinye aka na-adịgide adịgide site na ụlọ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ dị ka Ikea esonyela na njikọ Fraịde a na atụmatụ pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị sitere na ezinụlọ IKEA ma ọ bụ IKEA Business Network ma na-ere arịa ụlọ eji eme ihe n'ụlọ ọrụ a n'etiti Nọvemba 15 na 28, 2021, ha na-akwụ gị 50% nke ọnụahịa azụghachi nkịtị.
Anyị aghaghị ịma na anyị nwere nanị otu mbara ala nakwa na ihe ndị sitere n'okike nwere oke. Ọ bụ ya mere anyị ji na-agba mbọ iji chebe gburugburu ebe obibi na ibelata ihe mkpofu a na-emepụta nke na-ejedebe na-emerụ ma na-agwụcha ihe ndị dị ndụ. Ịkwado ngbanwe nke arịa ụlọ nke abụọ nwere ike ibelata akara ụkwụ carbon nke na-emetụta ihu igwe nke ukwuu. Ọnụ ego carbon dioxide na A na-awụsa ikuku na-abawanye site na nrụpụta na ojiji nke ngwaahịa ọhụrụ. Nke a bụ ihe mere eji kwalite oriri na-adịgide adịgide.
Enwere atụmatụ ndị ọzọ dịka Ecoalf, bụ onye ọsụ ụzọ na obodo anyị maka ịkwalite ejiji na-adigide. Ọ bụ maka ịghara isonye na Black Friday, n'agbanyeghị ime ụbọchị ahụ nwere ike inye gị nnukwu ego. Ọkwa mmepụta na oriri nke ụmụ mmadụ na-enwe ugbu a na-enwe mmetụta na-adịghị agbanwe agbanwe. Kwa afọ A na-emepụta ihe karịrị nde 150.000 na 75% na-ejedebe na mkpofu ahịhịa.
Mgbasa ozi dịka mpaghara Black Friday na-akwalite oke oriri na-enweghị isi nke ndị mmadụ niile. Mgbe ị na-ahụ uwe niile dị ọnụ ala dị ala, ị ga-aghọta na àgwà dị oke njọ, ruo n'ókè nke na enweghị ike ịmegharị ya ma ọ bụ jiri ya mee ihe. Ihe ndị a niile na-enwe mmetụta dị ukwuu na mbara ala dị ka ibelata akụ ndị sitere n'okike na imepụta gas na-ekpo ọkụ na-ejedebe na-akpata mgbanwe ihu igwe.
Anyị enweghị ike ịga n'ihu na-eri nri n'ọkwa anyị na-eri taa. Anyị kwesịrị ịmalite ime mkpebi ndị ọzọ na-echebara mbara ala anyị echiche, ebe ọ bụ na bụ naanị otu anyị nwere. Ịzụta obere mana ka mma. A ghaghị ịgba ndị mmadụ ume ka ha chee echiche ugboro abụọ tupu ịzụrụ ihe ọ bụghị nanị n'ihi ọnụahịa, kamakwa n'ihi àgwà.
Ụlọ ọrụ mmetọ na Green Friday
Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ka dị anya iji nweta nguzozi na-adigide. Ụlọ ọrụ ejiji bụ nke abụọ kachasị emetọ n'ụwa. Ọ na-anọchi anya ihe dịka 10% nke ikuku carbon zuru ụwa ọnụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20% nke mmiri mkpofu sitere na ụlọ ọrụ ejiji. Na mgbakwunye na oke mmiri a na-eri maka imepụta uwe na ikuku carbon dioxide, a na-agbakwụnye na emebeghi ihe eji emegharị ha.
Ọnụego imegharị akwa maka akwa dị obere. Ihe na-erughị 1% nke ihe niile a na-eji na-emepụta uwe n'ụwa nile ka a na-emegharị ma na-emepụta uwe ọhụrụ. Ọ bụ isi n'ihi na a naghị ekewapụ ihe mkpofu textile na ndị ọzọ. N'ihi nke a, ihe karịrị pasenti 75 nke ngwaahịa textile ndị ndị na-azụ ahịa tụfuru na-ejedebe na mkpofu ahịhịa ma ọ bụ gbaa ọkụ, na-ebute mmetọ karịa.
N'agbanyeghị ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ, enweghị ike ịkwụsị oke oriri Black Friday. Site na 2020 American Consumers ha ji ijeri $9.000 n'ịntanetị. Nke a bụ 21.6% karịa na afọ gara aga.
Enwere m olileanya na Green Friday nwere ike ime ka ndị mmadụ mara na iri nri maka iri nri adịghị mma ma maka akpa anyị ma ọ bụ maka gburugburu ebe obibi. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu gbasara Green Friday na ihe ebumnobi ya bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Friday green
Megharịa okwuchi ọcha